Multivarka အတွက် omelets - စာရွက်
Omelette - နံနက်စာဘို့ပြီးပြည့်စုံသော, လျင်မြန်စွာအလုံအလောက်ကိုပြင်ဆင်, သူ့ကိုစားစရာဘို့လက်မှာအမြဲရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ဘယ်လို multivarka အတွက် omelets စေရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမီးဖိုချောင်လက်ထောက်ကို အသုံးပြု. ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဒယ်အိုးထဲမှာဒါမှမဟုတ်မီးဖို၌ချက်ပြုတ်ထက်ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်လေကောင်းလေထွက်အလျင်အမြန်စေလွှတ်။
multivarka အတွက်ကြော် fluffy omelets
နို့ - 180 ml ကို;
ဆား, နံ့သာမျိုး, ဟင်းသီးဟင်းရွက် - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ငါ့လိုမင်းထက်ချပ်ခုတ်ဖြတ်။ ထောပတ်နှင့်အတူအမဲဆီ Multivarki ပန်းကန်ထဲမှာ, ငရုတ်ကောင်းပျံ့နှံ့ပထမဦးဆုံးက "မုန့်ဖုတ်" mode ကိုနှင့်3မိနစ်အဆင်သင့်ဖော်ထုတ်။ ထိုအခါခရမ်းချဉ်သီးထဲကအ တင်. အခြား3မိနစ်များအတွက် multivarku လှည့်။ ယခုငါတို့, ကြက်ဥကိုချိုးဖျက်နို့, ဆား, ငရုတ်ကောင်း add, ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် add, မုန့်ညက်နှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်အတူကအားလုံးကိုရောမွှေပါ။ ရောနှောမဟုတ်ရင်အလုံအလောက် fluffy omelets get multivarka သုံးမရပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် 15-20 မိနစ်ပြင်ဆင်နေအတူတူပင် "မုန့်ဖုတ်" mode မှာရောထွေးလျင်မြန်စွာ, ပန်းကန်လုံးထဲသို့ရရှိလာတဲ့အရောအနှောကိုလောင်း။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ညင်ညင်သာသာ stenochek ထံမှ omelets ခွဲခြားဖုံးနှင့်တစ်ဦးသစ်သား spatula ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ multivarka သာဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူတစ် omelets စေမနိုင် - သငျဝက်အူချောင်း, ဝက်ပေါင်ခြောက်, အသားပြုတ်ကြက်သား, ယေဘုယျအားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းကိုသင်၏နှလုံးအလိုဆန္ဒများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
multivarka ၏စုံတွဲတစ်တွဲပေါ် Omelette
နို့ - 225 ml ကို;
သေးငယ်တဲ့ဆီလီကွန်မှိုသုံးစွဲဖို့ multivarka အဆင်ပြေ၏စုံတွဲတစ်တွဲပေါ် omelets ပြင်ဆင်ထားရန်။ ဒါကြောင့်အရသာအတွက်ဆားကိုထည့်သွင်း, နို့နှင့်အတူကြက်ဥမွှေပါ။ ဆီလီကွန်ပုံစံချောဆီကြောင့်ထဲသို့ရရှိလာတဲ့အရောအနှောကိုလောင်း။ အဆိုပါကပေါင်းဘို့ set ကိုဆန်ခါ, ခွက်ကို Multivarki4multistakana ရေသွန်းလောင်းခြင်း, ဆီလီကွန်မှို။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို "ရေနွေးငွေ့" ဖော်ထုတ်နှင့် 15 မိနစ်တစ်ခု omelette ပြင်ဆင်လော့။ အဆိုပါအရှင်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်လေထုရရှိသောတစ်ခု omelette ပြင်ဆင်ကြ၏။
multivarka အတွက်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ omelets
ကြက်ဥ -5PCs; ။
နို့ - 1 multistakan;
ဒိန်ခဲ - 60 ဂရမ်,
ကြက်ဥနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောပါနဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့ပန်းကန်လုံးထဲသို့ကိုဝေကိုမြည်းစမ်းဖို့နို့နှင့်ဆားကိုထည့်သွင်းလျက်, အရောအနှော whisk whisk ။ ထို့နောက်ကုန်တယ်ဇီယာစေ့ကိုထည့်ပါ။ multivarka တွင် "မုန့်ဖုတ်" mode ကို, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့်ခွက်ကိုအမဲဆီဖော်ထုတ်နှင့်ကြက်ဥအရောအနှောထဲသို့သွန်းလောင်း။ ဒိန်ခဲ add ချက်ပြုတ်ရဲ့ start ကနေ5မိနစ်ပြီးနောက်, တစ်ဦးကြမ်း grater ပေါ်ပြီးလျှင်။ နှင့်အခြားမိနစ် 20 တစ်ချိန်တည်းမှာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
multivarka အတွက်ဝက်အူချောင်းနှင့်မုန်လာဥနီနှင့်အတူ omelets
နို့ - 50 ml ကို;
သောက်သည်ဝက်အူချောင်း - 100 ဂရမ်;
ကြက်သွန်ဖြူ - လေးညှင်းပွင့၏ထက်ဝက်;
ပြုတ်မုန်လာဥနီ - 100 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 1 tbsp ။ (ကဆလိုက်နှင့်အတူ) ဇွန်း,
ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပင်စိမ်း - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
multivarka mode ကို "မုန့်ဖုတ်" တွင်ဖော်ထုတ်နှင့် diced ဝက်အူချောင်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ရေနံဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲကြော် 3-4 မိနစ်။ ထိုအခါကုန်တယ်ကြက်သွန် add နှင့်စတိုင်အောင်ကြော်။ ထိုအခါအကြောင်းမိနစ်များအတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြော်ရှောက်သွားထည့်ပါ။ အနည်းဆုံးအန်စာတုံးခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ပြုတ်မုန်လာဥထည့်ပါ။ အခုတော့မုန့်ညက်, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ပင်စိမ်းနဲ့လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား add, နို့နှင့်အတူကြက်ဥရိုက်တယ်။ ရလဒ်အရောအနှောပြင်ဆင်ထားဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဝက်အူချောင်းဖြည့်ပါနှင့် "မုန့်ဖုတ်" တွင် 15 မိနစ်ချက်ပြုတ်။ ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ကအခြားဘက်မှာချက်ပြုတ်၏မကုန်မီ5မိနစ်များအတွက် omelette လှန်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ထို multivarka အဆင်သင့်အတွက်ဝက်အူချောင်း, ခရမ်းချဉ်သီးများနှင့်မုန်လာဥနီနှင့်အတူရှိသမျှတို့, omelets ပါပဲ။ အစာစားချင်စိတ်ဘွန်!
သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်လက်ထောက်ချက်ပြုတ်နည်းများထွက်ကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းများလည်းနိုင်ပါတယ် Aerogrill အတွက် omelets နှင့် မီးသင်္ဘော ။
တစ်မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုတဖို၌ Pie - အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောချက်ပြုတ်နည်းများအရသာရှိတဲ့ကိတ်မုန့်
ပျားရည်ကိတ်မုန့် multivarka - မုန့်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူအရသာများနှင့်ရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများအချိုပွဲ
Multivarka အတွက် Cheesecake
Multivarka အတွက် Meatless အစားအစာများ - တစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်အရသာနဲ့ရိုးရိုးချက်ပြုတ်နည်းများရယူထားသော
Multivarka အတွက် stewed မှို
Multivarka အတွက်ကြော် halophytes
Multivarka အတွက် Shurpa
Lenten မုန့် multivarka
ဂျာနယ်လစ် Bruce Willis, သူ့ဇနီးနှင့်အငယ်သမီးနှင့်အတူ Elle အပြင်အဆင်မဂ္ဂဇင်းအဖုံးဝေဖန်
ဖက်ရှင်အင်္ကျီ - အားလုံးအခါသမယများအတွက်အလှဆုံးစတိုင်များနှင့်အရောင်များ
Gidatida fallopian tube
အဆိုပါ appendages ၏နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်း
ပန်းသီးနှင့် cranberries ၏ Compote